INtaba iTatras: izici, ukwakheka kwezwe kanye nemisebenzi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 29/09/2021 15:21 | I-Geology
Kusuka kokunye kokuheha izivakashi eSlovakia Izintaba zeTatras. Izintaba kuphela okucatshangwa ukuthi zitholakala ePoland, indawo enkulu yepaki yemvelo isendaweni yaseSlovak. Khumbula ukuthi akufanele kudidaniswe neNízke Tatry, iLow Tatras, eningizimu eningizimu yeHighlands. Lezi zintaba zinezici ezihlukile ngakho-ke ziyathandeka ukuvakashelwa.
Kule ndatshana sizokutshela ngazo zonke izici, abantu kanye nemisebenzi eyenzeka eMount Tatras.
2 Abantu baseMount Tatras
3 Imisebenzi ye-Mount Tratas
3.1 Ezemidlalo zokushushuluza nezasebusika
3.2 Ukuhamba eNtabeni iTatras
IVysoke Tatry igama lesiSlovak lezintaba eziphakeme zeTatras, okuyingxenye yezintaba zeCarpathia, ephakeme kakhulu ngasempumalanga yeRomania. Izintaba ezingaphezu kwezingama-25 zingaphezu kwamamitha angu-2.500 XNUMX ukuphakama. Endaweni engamakhilomitha angama-25 ububanzi namakhilomitha angama-78 ubude kuphela, ukubukeka kwamachibi asezintabeni, izimpophoma kanye nemihosha kuyancipha.
Izintaba zeTatras zakhulunywa okokuqala ngonyaka we-999, lapho uBoleslaus II ohloniphekile esebenzisa izintaba njengomngcele wePrincity of Bohemia. ITatra Mountains National Park (TANAP) iyisiqiwi esidala kunazo zonke eSlovakia, yasungulwa ngo-1949 futhi ube yi-UNESCO Biosphere Reserve kusukela ngo-1993, eqinisekisa ukwehlukahluka kwezitshalo nezilwane. Indawo ebekiwe iyisiphephelo sezinhlobo ezithile ezisengcupheni yokushabalala, njengebhere elinsundu laseYurophu i "King of the Tatra Mountains", elingaba nesisindo esingafika kuma-350 kilograms futhi lifike kumamitha amabili ubude. Aziyona ingozi ngoba ziyobalekela abantu futhi kwesinye isikhathi zingabonakala ziwela umgwaqo. Kujwayelekile futhi ukubona ama-chamois, ama-chamois nezimbila.
Ama-High Tatras ahlukaniswe yi-Western Tatras, i (central) Tatras, kanye neBelensk Tatras, ahlukaniswa ngokwakheka kwendawo nendawo akuyo. Inani labantu lisemgwaqweni obizwa ngeFreedom Road, ohlanganisa lezi zingxenye ezintathu zeHigh Tatras.
Abantu baseMount Tatras
Isisekelo esihle sokufunda ngezintaba zeTatra yiVysoké Tatry, equkethe amadolobha amathathu: Štrbské Pleso, Starý Smokovec neTatranská Lomnica.
Indlunkulu yokuphatha ye-High Tatras, iTatranska Lomnica, enye yezindawo zokuhlala ezinkulu nezinhle kunazo zonke, itholakala kuFreedom Road, eceleni kweLomnicky Peak. Ingenye yezindawo ezishushuluza kakhulu eSlovakia. Kukhona neMnyuziyamu weTANAP, lapho ungafunda khona kabanzi mayelana nendawo yokugcina izinto eziphilayo.
E-Tatranska Lomnica, singathola izindawo zokungcebeleka zokushushuluza nezindawo zokuhlala, kufaka phakathi i-Hotel Lomnica, eyakhiwa ngo-1893, ngemuva kwamashumi eminyaka yokunganakwa, ibuyiselwe esimweni sayo sangaphambili esasibukeka kahle. Kunemizila eminingi yokuqwala izintaba nokukhuphuka ezintabeni zeTatra, uma unentshisekelo, ungasibhalela ukuze sikukhombise indlela.
IStrbske Pleso yindawo yokushibilika eqhweni, izivakashi kanye nolwandle. Itholakala echibini le-alpine leStrbske glacier futhi kuyindlela enhle yokuhamba ngezinyawo uye eKrivan naseRysy. Amakhilomitha ayo ayi-16 emizila yokushushuluza enqamula izwe kanye nemithambeka ekwehleni kuyizizathu ezizwakalayo zokuza.
USary Smokovec unesikhalazo ngemoto yekhebula iHrebienok futhi kuyindawo ekahle yokuqala imizila yezintaba zasehlobo. Imizuzu nje engama-30 ukusuka emotweni yekhebula, uzothola impophoma yeStudeny potok.
Imisebenzi ye-Mount Tratas
Akungabazeki ukuthi amaTatar akhuthaza imisebenzi efana nokushushuluza, ukwehla noma ukushibilika eqhweni noma eqhweni, kodwa futhi kuyizindlela ezinhle zokuhamba izintaba nokuxhumana nemvelo ehlobo.
Ezinye izindawo zokungcebeleka zokushushuluza zinama-spa namachibi okushisa, njenge-AquaCity Poprad, i-Aquapark Tatralandia noma iBesenova Idolobha lasePoprad libhekwa njengesango lezintaba zeTatra ngoba alikude nezintaba, okuvumela izivakashi ukuthi zithole indawo yokuzilibazisa ebanzi. Isiphephelo seChata pod Rysmi ngaphansi kwesiqongo sikaRysy siphakeme kakhulu eMount Tatras, Amamitha angama-2250 ngaphezu kogu lolwandle
Umzila weTatranska Magistrala uyindlela ende kunazo zonke eHigh Tatras, enamakhilomitha angaphezu kwama-70 axhuma ezinye zezindawo ezinhle kakhulu futhi ezidumile epaki yemvelo, njengePodbanské, Štrbské pleso (Lake Strbsk), Popradské pleso (Lake Poprad), Hrebienok, Skalnaté pleso (Lake Skalnate) noma Zelené pleso (Green Lake). Imvamisa kuthatha izinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu ukuqeda, ukulala endaweni yokukhosela.
Ezemidlalo zokushushuluza nezasebusika
Indawo ende yokushibilika eqhweni ezintabeni zeTatra itholakala eTatranska Lomnica Ski Center. Isuka eLomnicke sedlo bese iya emzaneni waseTatranska Lomnica. Ubude bube ngamakhilomitha ayi-6Umthambeko ungamamitha ayi-1300 kanti indawo yokwehla ifanele abagibeli bezindiza abasezingeni eliphakeme kuphela.
Okunye kwezinto esingazithola kumaTatras ingadi yezitshalo ephakeme kunazo zonke eSlovakia eLomnicky peak, engamamitha ayi-2634 ukuphakama. Yize ingekho enkulu, kunezinhlobo ezingama-22 zezimbali engadini yezitshalo. Phezulu kweLomnicky Peak kukhona indawo yokubuka ephindwe kabili njengendawo yokuhlala.
Kunamachibi angaphezu kwekhulu epaki lesizwe. Ichibi elikhulu futhi elijule kakhulu yiVeľké Hincovo pleso, iModré pleso ephakeme kakhulu ingamamitha angu-2.192 kanti edume kakhulu yi-Štrbské pleso nePopradské pleso. Noma kunemihume eminingi, yiBelianska jaskyňa kuphela efakwe futhi evulekele umphakathi.
Okunye okuhehayo ebusika yiHrebienok Ice Dome, isithombe seqhwa esikhetha ingqikithi unyaka nonyaka (njengeSagrada Familia eBarcelona). Lo ngumsebenzi wamahhala futhi ojabulisayo wezingane.
Ukuhamba eNtabeni iTatras
Ezinye iziqongo ezibaluleke kakhulu nezinhloso ezibekiwe zomzila wokuhamba izintaba yiGerlachovsky Stit (isiqongo esiphakeme kunazo zonke, esingama-2655 m ngaphezu kogu lolwandle), iLomnicky Stit evakashelwe kakhulu ngenxa yemoto yekhebula, noma iKrivan eseMpumalanga Tatras, engenye yezintaba iziqongo ezidume kakhulu. AmaSlovaks nawo awuphawu lwezwe.
Engxenyeni yeSlovak yama-Eastern Tatras, zingu-7 kuphela iziqongo ezingafinyelelwa ngemikhondo. Ezimbili zazo zisemngceleni wasePoland futhi zingatholakala futhi kusuka ohlangothini lwasePoland. Ezinye iziqongo ohlangothini lwaseSlovakia zingatholwa kuphela ngesiqondisi sentaba esiqinisekisiwe.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeNtaba K ngemuva nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » INtaba iTatras